Macalin Ole Gunnar Solskjær oo war naxdin leh ee ku saabsan Rashford u sheegay taageerayaasha Man Utd – Gool FM
(Manchester) 19 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa soo wariyay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaalada dhaawac ee Marcus Rashford.
Ole Gunnar Solskjær ayaa niyadjabiyay taageerayaasha kooxda Manchester United, kaddib hadaladii uu kaga dhawaajiyay shirkii jaraa’id uu maanta ka soo muuqday kahor kulanka habeen dambe ay kooxda Club Brugge ku wada ciyaari doonaan tartanka UEFA Europa League.
Macalin Solskjær ayaa wuxuu xaqiijiyay in Marcus Rashford la rajeyanayo inuusan ciyaarin kulamada Manchester United kaga dhiman xilli ciyaareedkan, sabab la xiriirta dhaawacii ka soo gaaray bishii hore dhanka dhabarka.
Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa yiri:
“Waxaan rajeynayaa in Rashford uu mar kale ciyaari doono xilli ciyaareedkan, laakiin way adag tahay. Ma ihi dhaqtar, laakiin waxaan jeclaan lahaa inuu si dhaqsi ah ku soo kabto”.
“Nasiib daro, Marcus Rashford wuxuu u baahan doonaa dhowr bilood oo dheeri ah, waxaa laga yaabaa inuu maqnaado ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka”.